Vaovao - Ny mahasamihafa ny fanaovana hosoka sy ny mihodina
Ny famafana dia afaka manafoana ny kilema toy ny long-as-cast mandritra ny fandefasana smelting ary manatsara ny mikraoba. Mandritra izany fotoana izany, noho ny fitehirizana ny làlam-by feno, ny toetra mekanikan'ny famonoana dia mazàna tsara kokoa noho ny fametahana fitaovana mitovy. Ho an'ireo ampahany manan-danja amin'ny milina mifandraika amin'ny enta-mavesatra be sy miasa mafy, ny famonoana dia ampiasaina amin'ny ankamaroany afa-tsy ny endrika tsotra kokoa izay azo ahodina, mombamomba na faritra atsofoka.
Ny forging dia azo zaraina amin'ny forging maimaim-poana, forging maty ary forging maty mihidy.
1. Fandefasana maimaim-poana. Amin'ny fampiasana fiantraikany na tsindry hanaratsiana ny metaly eo an-tampon'ny ambony sy ambany (anvil) hahazoana ny fametahana takiana, dia misy ny fanaovana hosoka amin'ny tanana sy ny forina mekanika.
2. maty forging. Ny forging maty dia mizara ho forging for open die ary ny forging maty mihidy. Ny banga vy dia voageja ary simba amin'ny forging die miaraka amina endrika iray hahazoana fametahana. Azo zaraina ho lohateny mangatsiaka, forging roll, forging radial ary extrusion sns. Andraso.
3. Satria tsy misy tselatra amin'ny forging maty mihidy sy manakorontana mihidy, avo ny tahan'ny fampiasana fitaovana. Azo atao ny mamita ny famaranana ny famonoana sarotra amin'ny dingana iray na dingana maromaro. Satria tsy misy tselatra dia mihena ny velaran-tany misy ny hery, ary mihena koa ny enta-mavesatra takiana. Na izany aza, marihina fa tsy azo ferana tanteraka ny banga. Noho io antony io dia tokony fehezina mafy ny habetsahan'ny banga, maty ny toerana misy ny forging ary ny fandrefesana ny fametahana, mba hampihenana ny fihenan'ny maty hosoka.
Ny Rolling dia fomba fanodinana tsindry ahafahan'ny bileta vy mandalo amin'ireo horonan-taratasy mihodina (endrika isan-karazany). Noho ny famatrarana ireo horonan-taratasy dia mihena ny faritra ampitan'ny fitaovana ary mitombo ny halavany. Ity no fomba famokarana be mpampiasa indrindra amin'ny famokarana vy. Famokarana profil, takelaka ary fantsona.
Araka ny fivezivezin'ny sombin-javatra mihodina, ny fomba mihodinkodina dia mizara ho: fihodinan-joro lava, fihodinan'ny hazo fijaliana ary fihodinan'ny hazo fijaliana.
Ny fizotran'ny fihodinana lava dia dingana iray izay anelanelan'ny metaly eo anelanelan'ny horonan-taratasy roa izay mihodina amin'ny lalana mifanohitra aminy ary misy ny fahasamihafana plastika eo anelanelany.
Fihodinan'ny hazo fijaliana: ny làlan'ny fivezivezena amin'ilay sombin-javatra voahodina aorian'ny fivoarana dia mifanaraka amin'ny fitarihan'ny axis roll.
Skew rolling: Mihetsiketsika ny tadim-bokotra ary ny zoro mihodina sy ny axe dia tsy manana zoro manokana.
Izy io dia afaka manimba ny firafitry ny vy amin'ny ingot vy, manadio ny voan'ny vy ary manafoana ny lesoka amin'ny mikraoba, ka matevina ny firafitry ny vy ary mihatsara ny toetra mekanika.
Ity fanatsarana ity dia hita taratra amin'ny lalana mihodina, hany ka tsy isotropika intsony ny vy amin'ny lafiny iray; ny bubble, ny triatra ary ny looseness niforona nandritra ny fanariana dia azo amboarina eo ambanin'ny asan'ny hafanana sy ny fanerena avo lenta.
1. Rehefa avy mihodina, ny fampidirana tsy metaly (indrindra ny sulfides sy ny oksida, ary koa ny silika) ao anaty vy dia apetaka ao anaty ravina manify, ary mitranga ny delamination (interlayer). Ny delamination dia miharatsy ny fananana vy amin'ny alàlan'ny hateviny, ary mety hitranga ny fandravan'ny interlayer rehefa mihena ny lasitra. Ny fantsona eo an-toerana izay atosiky ny fihenan'ny lasitra dia matetika mahatratra imbetsaka ny fihenan'ny teboka vokatra, izay lehibe kokoa noho ny ketrona ateraky ny enta-mavesatra.
2. Adin-tsaina sisa tavela vokatry ny fampangatsiahana tsy mitovy. Ny adin-tsaina sisa dia ny adin-tsaina mandanjalanja anaty tsy misy hery avy any ivelany. Ny fizarana vy mafana mihodina amin'ny faritra miampita samihafa dia misy fihenjanana sisa tavela. Amin'ny ankapobeny, arakaraka ny haben'ny faritra amin'ny haben'ny vy no mampisy ny adin-tsaina sisa. Na dia mandanjalanja tena aza ny adin-tsaina sisa tavela, dia mbola misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny mpikambana vy eo ambanin'ny asan'ny hery ivelany. Ohatra, mety hisy vokany ratsy amin'ny fiovana, fahamendrehana, fanoherana ny havizanana sns.
3. Ny vokatra vy mafana mihodina dia tsy mora fehezina raha ny hateviny sy ny sakan'ny sisiny. Fantatsika ny fanitarana sy ny fihenan'ny hafanana. Hatramin'ny voalohany, na dia mifanaraka amin'ny fenitra aza ny halavany sy ny hateviny, dia hisy ny tsy fitoviana ratsy aorian'ny fampangatsiahana farany. Arakaraka ny halehiben'ny fahasamihafana misy, ny hatevin'ny hateviny, ny fahitana azy miharihary. Noho izany, ho an'ny vy lehibe, ny sakan'ny sisiny, ny hateviny, ny halavany, ny zorony ary ny sisiny amin'ny vy dia tsy azo atao mazava tsara.